आज भोली सामाजिक संजालमा चर्चा मा आएको तस्विर हो रमेश प्रसाई र नन्दा सिंह ।विवाह बन्धनमा बाधिँने हेर्नुहोस ! – Complete Nepali News Portal
आज भोली सामाजिक संजालमा चर्चा मा आएको तस्विर हो रमेश प्रसाई र नन्दा सिंह ।विवाह बन्धनमा बाधिँने हेर्नुहोस !
काठमाडौँ । आज भोली सामाजिक संजालमा चर्चा मा आएको तस्विर हो रमेश र नन्दा सिंह । सम’सामयिक विष’यमा खरो रुप’मा बोल्ने रमेश प्रसाई विवाह बन्धनमा बाधिँने भएका छन् । उनले कालीकोटकी नन्दा सिंहसँग विवाह गर्ने भएका छन् । रमेश र नन्दाले आगामी २२ गते सोमबारका दिन बिबाह गर्न लागेका छन् ।
प्रसाईको परि’चय पछि’ल्लो समय गा’यकका रुप’मा बनेको छ । उनले हालसालै गाएको ‘रिंकी बुन्को रागोलाई’ बोलको ‘कभर संङ्ग’ लोकप्रिय बनेको छ । उनको ज्ञान, बोल्ने शैली र क्षमताबाट मानिसहरु प्रभावित छन् । उनी दो’होरीमा पनि अब्बल छ्न् । उनी पछिल्लो समय इन्द्रेणीमा समेत आ’वद्ध छन् ।
नन्दा र रमेशविच ३ बर्ष’देखि ग’हिरो प्रेम सम्बन्ध रहेको छ । ३ बर्ष अगाडि नन्दालाई रमेशले प्रे’म प्रस्ता’व राखेका थिए । ३ बर्ष अगाडि इन्द्रेणी कार्यक्रममा भेट भएपछि उ’नीहरु नजिक भएका थिए । रमेशले बिबाहको प्रस्ताव राखेका थिए । नन्दा र रमेशको बिहे धरानबाट हुने वुझिएको छ ।
नन्दा सिंह पनि दृष्टिविहीन हुन् । उनले अभिभावक नभएका बालबालिकालाई सहारा दिँदै आ’एकी छन् । बा’ल्यकाकी साथी गीता बस्नेतसँग मिलेर बा’लबालिकाको हेरचाहका लागि काठमाडौंमा ‘अन्त’रदृष्टि नेपाल’ ना’मक सं’स्था चला’एकी छन् । संस्थाले अनाथ असहाय बालबालिकाको हेरचाह, पढाई र अन्य सबै जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको छ ।